Raha te hahafantatra ny tantaran'ny Photoshop ianao dia tsidiho ny Version Museum | Famoronana an-tserasera
Adobe Photoshop dia hidina ao amin'ny tantaran'ny tantara Ary noho izany dia efa manana tranombakoka iray izahay izay mampiseho aminao ny tantarany amin'izay ho fiantombohany ary na dia ny fivoaran'ny programa famolavolana be mpampiasa indrindra eto an-tany aza.
Ka afaka manohy ny dian'izy ireo ianao nanomboka ny taona 1990 ka mandraka ankehitriny izay niverenany tao anatin'io programa CC io ary ahafahantsika miditra amin'ny fitaovana manintona tsirairay avy fotsiny.
Museum Museum dia tranonkala an-tserasera izay Mampiseho ny tantaran'ny tranonkala, lalao, fampiharana sy ny rafitra miasa malaza. Raha atao teny hafa, dia hitanao ny fivoaran'ny Internet amin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity izay nahatonga ny olona an-tapitrisany hahafantatra ny anatiny sy ny vokariny.
Hevitra tena manaitra ary toy ny hoe tany amin'ny tranombakoka tena izy isika, Version Museum dia manandrana maneho an-tsary ny sasany amin'ireo singa izay efa antokon'olona meloka tamin'ny zavatra ananantsika eo am-pelatanantsika ankehitriny amin'ny alàlan'ny solosaina PC na finday aza.
Podemos mahita fanombohana Photoshop ary ahoana no nahagaga kely ireo dikan-teny voalohany nataony hoe nanao ahoana ny interface tamin'ireny taona ireny. Ny marina dia mahagaga fa afaka manomboka mamorona miaraka amina rindrambaiko tsy mitombina toy izany ianao, saingy nitondra valiny lehibe mba ho fototry ny zavatra rehetra izay ho avy any aoriana.
Toerana mahaliana ho fantatra zahao toy ny sasany amin'ireo singa ao amin'ny Photoshop Niova tanteraka izy ireo toa ny sary famantarana, ny bara fanaovana fitaovana na ny fanaraha-maso ny fisafidianana ny loko. Misy nostalgia kely hipoitra ho an'ny sasany izay niaina ity fizotry ny fanovana programa ity izay nanova ny tontolon'ny famolavolana manerantany.
Raha ampitahaintsika amin'ny anio izay Photoshop CC beta dia efa sedraina for afaka mampiasa azy amin'ny takelaka toa an'i Apple, azontsika atao tsara ny mahatakatra ny fivoaran'ny rindrambaiko goavambe ao anatin'ny taona vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny tranombakoka an-tserasera dia mampiseho aminao ny tantaran'ny fiandohana sy ny fivoaran'ny Photoshop
Fahadisoan-kevitra lehibe nataon'i Amazon tamin'ny Prime Day ka saika hanome fakantsary $ 13.000